banking fraud(banking fraud) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
बैंकिङ ठगीबाट बच्न ग्राहक पनि सचेत हुन आवश्यक, अपनाउनुस् यी ६ टिप्स्
– धर्म मलासी काठमाण्डौ । ग्राहकले सुरक्षित स्थान ठानी बैंकमा आफूले मेहनत गरी कमाएको पैसा जम्मा गर्ने गर्दछन् । वास्तवमा बैंक तुलनात्मक रुपमा पैसाका लागि सुरक्षित स्थान हो । तर केही ग्राहक भने सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बैंकमाथि मात्रै थुपारी आफूले अपनाउनुपर्ने सतर्कताबाट भने पन्छिन खोज्छन् । जसले गर्दा बैंक ठगीका घटनाहरु...
बगरको जग्गा धितो राखेर बैंकको रु. ४.६० करोड झ्वाम, दुई इन्जिनियरसहित ६ पक्राउ
झापा । नक्कली कागजात तयार गरी रु चार करोड ६० लाख ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले छ जनालाई पक्राउ गरेको छ । राजमार्गसँग जोडिएको खोलाको बगर धितो राखी ठगी गरेको आरोपमा उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । नक्कली कागजात बनाएर काठमाण्डौ–३१ का सुरेन्द्र श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको स्वर्णिम एण्ड श्रीजन कम्पनीको लागि बैंकबाट रु चार करोड ६० लाख कर्जा...
तत्कालीन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकबाट रु. १८ करोड हिनामिनामा ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
तुलसीपुर । दाङको नारायणपुरस्थित तत्कालीन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक शाखाबाट भएको झण्डै १८ करोड रुपैयाँ हिनामिनामा ५६ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा बैंकका सञ्चालक, कर्मचारी र खातावाल गरी ५६ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । जिल्ला...
काठमाण्डौ । खोलाको बगर तथा खोल्सा जग्गा धितो राखी बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड (बीओके) बाट साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको बैंकिङ कसुर मुद्दाको अनुसन्धान पूरा गरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको छ । यो बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका बीओकेका तत्कालीन सीईओ अजय...
काठमाण्डौ । उपत्यकामा बैंकिङ कसुरका घटनामा वृद्धि भएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार ५६६ विरुद्द बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा काठमाडौँमा दुई हजार ३३८, भक्तपुरमा ७६ र ललितपुरमा १५२ जनाविरुद्द मुद्दा दायर भएको हो । बैंकिङ कसुरमा काठमाडौँमा १५,...
बैंकमा जम्मा भएको तपाईको पैसा 'सीम स्वाप'को खतरामा, कसरी बच्ने ?
काठमाण्डौ । युग डिजिटाइज्ड भएसँगै मानिसले सुविधा पाएका छन् । तर, सुविधासँगै जोखिम पनि बढिरहेको छ । डिजिटाइज्ड युगमा ठगहरुको साम्राज्य समेत उस्तै गरी बिस्तार भइरहेको छ । ठगीको नयाँ–नयाँ शैलीका कारण सर्वसाधारण जोखिममा छन् । पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्र समेत तीव्र डिजिटाइज्ड हुँदै गएको छ । तर, यो सँगै बैंकिङ ठगीको घटना समेत...
नक्कली कागजात बनाई देवः बैंकबाट रु. २.७१ करोड ठगी
काठमाण्डौ । हुँदै नभएको सवारी साधन देखाएर देवः विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक समेतको संलग्नतामा एक गिरोहले २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको छ । बैंकमा सवारी साधन धितो राखी ऋण लिने क्रममा ब्लु बुकको प्रतिलिपिमा नक्कली डाटा तयार गरी आफू अनुकुल विवरण भर्दै बैंकमा पेश गरी मिलेमतोमा गिरोहले २ करोड ७१ लाख ठगी गर्ने सफलता पाएको प्रहरीको...
समाचार प्रभाव: झूठो विज्ञापन सानिमाले सच्यायो, भ्रमको खेती गरेको पुष्टि
काठमाण्डौ । गैरआवासीय नेपाली(एनआरएनए)हरुको समेत लगानी रहेको सानिमा बैंकले ‘थ्री इन वान खाता’को विज्ञापन गर्ने नाममा झूठको खेती गरेको स्वीकार गरी त्यसमा सुधार गरेको छ । यसबाट केही बैंकहरु सर्वसाधारणमा कसरी भ्रम छरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ । बैंकले सो सेवाको विज्ञापनको क्रममा उल्लेख गरेका कैयन झूठहरुलाई सच्याएर...
‘गैरकानूनी सेवा’को भ्रामक विज्ञापन गर्दै सानिमा बैंक, नियामक बेखबर
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । गैरआवासीय नेपाली(एनआरएनए)हरुको समेत लगानी रहेको सानिमा बैंकले यस हप्ताको सुरुवातदेखि नै गैरकानूनी सेवाको बिषयमा भ्रमपूर्ण र झूठा विज्ञापन गरिरहे पनि नियामक तथा सम्बद्ध निकायले ध्यान नदिएका पाइएको छ । थ्री इन वान सानिमा खाताको नाममा ‘नेपालकै पहिलो पटक सेयर खरिद तथा बिक्री अब एक क्लिक टाढा’ भनी बैंकले...
एभरेष्ट बैंकको साझेदार बैंकमा ११.४ हजार करोड भारु घोटाला, एनपीए बढ्दा बैंक धराशायी
काठमाण्डौ । नेपालमा एभरेष्ट बैंकको रणनीतिक साझेदार पञ्जाब नेशनल बैंकको एउटा शाखाबाट ११ हजार ३ सय ४० करोड भारु घोटाला भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका बैंकका १० कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् भने भारत र आसपासका देशका बैंकहरुलाई समेत यो प्रकरणका कारण असुरक्षाको चिन्ता बढाइदिएको न्यूज एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । यो...
काठमाण्डौ । नेपाली सेनाका एक सहायक रथीको समेत मिलेमतोमा कृषि विकास बैंक लिमीटेड काठमाण्डौ न्यूरोडस्थित मुख्य शाखा कार्यालयबाट ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ ठगी गरिएको रहस्य खुलेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)का अनुसार बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा ठगिएको रकममध्ये ७० लाख रुपैयाँ नेपाली सेनाका एक सहायक रथीको खातामा...
काठमाण्डौ । ‘जो अगुवा, उही बाटो.....’ भन्ने उखान मेगा बैंकको व्यवस्थापनले चरितार्थ गरेको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) रहेको बैंकले ७ महिनादेखि लगानीकर्ताको लगानीलाई बन्धक बनाउँदा समेत नियामक तै चूप मै चूप छन् । यो बैंकले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जरको सम्झौता गरेको ७ महिना भइसक्दा समेत...